မဒေါင်းလုပ် Communication မဆော့ဝဲ မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် Communication မဆော့ဝဲ
WhatsApp သည်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သောအခမဲ့စာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မိုဘိုင်းနှင့်ဝင်းဒိုးကွန်ပျူတာ (ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာနှင့် desktop အက်ပလီကေးရှင်းအနေဖြင့်) တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ WhatsApp ကိုသင်၏ဖုန်းပေါ်တွင် download လုပ်၍ သုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်သင်၏ Windows PC (သို့) Mac ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် desktop application...
Zoom သည် Windows application တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်အနေဖြင့်ဗီဒီယိုစကားပြောဆိုမှုများကိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ အများအားဖြင့်အဝေးသင်ပညာရေးတွင်အသုံးပြုသည်၊ အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များရှိပြီးတူရကီဘာသာစကားအထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။ Zoom ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်နည်း။ Zoom application ကို download လုပ်ပြီးနောက် program ကို double click...
Discord ကိုကစားသမားများ၏လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်တီထွင်ထားသောအသံ၊ စာသားနှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Discord သည်လစဉ်တက်ကြွအသုံးပြုသူသန်း ၁၀၀ ကျော်၊ အပတ်စဉ်တက်ကြွသောဆာဗာ ၁၃.၅ သန်းနှင့်နေ့စဉ်စကားပြောချိန် ၄ ဘီလီယံရှိသောကစားသမားများကြိုက်နှစ်သက်သောလူကြိုက်အများဆုံးဆက်သွယ်ရေးပရိုဂရမ်ကို Windows, Mac,...
Skype ဆိုတာဘာလဲ။ Skype သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိကွန်ပျူတာနှင့်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအသုံးပြုသောအခမဲ့ video chat နှင့် messaging application များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်စာပို့ရန်၊...
BiP Messenger သည် Turkcell ၏အခမဲ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးနှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ (Android နှင့် iOS)၊ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများနှင့် desktop (Windows နှင့် Mac ကွန်ပျူတာများ) တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံရှိ WhatsApp နှင့် Telegram ကဲ့သို့လူကြိုက်များသောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး...
လူကြိုက်များသောမိုဘိုင်း messaging app Viber သည် ၀ င်းဒိုးတွင်ရနိုင်သည်။ Viber ၀ င်းဒိုးဆော့ဖ်ဝဲကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်၏စာရင်းတွင် Viber အသုံးပြုသူများနှင့်စာတိုပေးပို့နိုင်ပြီးအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Viber Windows ဆော့ဖ်ဝဲသည်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာရှိ Viber အက်ပလီကေးရှင်းရှိအဆက်အသွယ်များ၊...
ယုံကြည်စိတ်ချရသော chat program ICQ သည်၎င်း၏ ICQ 8 ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူအစီအစဉ်တွင်ပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အသစ်စက်စက် interface နှင့်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူနောက်တဖန်သက်သေပြတော်မူသောစာတိုပေးပို့ရေးအစီအစဉ်, အသစ်တစ်ခုပြည်နယ်မှသူ့ဟာသူယူဆောင်ခဲ့သည်။ စကားပြောဆိုမှုပြတင်းပေါက်များနှင့် Quick IM ကဲ့သို့သော tab...
Twitch ကိုမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံး Twitch စီးများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုစုစည်းရန်ရည်ရွယ်သည့်တရားဝင် Twitch desktop application အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Twitch Desktop Application သည်သင်၏ကွန်ပြူတာများတွင်လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်၍ သုံးနိုင်သည်။ software သည်သင်၏အင်တာနက် browser အစား Twitch...
Cyber ​​Dust သည် Snapchat ကဲ့သို့သောစနစ်ဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအလိုအလျှောက်ပယ်ဖျက်နိုင်သောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်ဖြစ်သည်။ Cyber ​​Dust သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်လူများနှင့်စကားပြောနေစဉ်အချိန်ကာလတစ်ခုအကြာတွင်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မိုဘိုင်းနှင့် Windows 10...
TeamSpeak3သည်အထူးသဖြင့်ကစားသမားများကြားတွင်လူကြိုက်များသောအသံနှင့်အုပ်စုလိုက်စကားပြောခွင့်ပြုသည်။ ပရိုဂရမ်၏တတိယမျိုးဆက်ကို TeamSpeak Classic နှင့် TeamSpeak2အတွက်အဆင့်မြှင့်ထားသောဗားရှင်းအစား C ++ တွင်ပြန်လည်ရေးသားထားသောပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားနိုင်သည်။...
mobile messaging application တစ်ခုဖြစ်သည့် LINE ၏ desktop version ကြောင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏ LINE အကောင့်ကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များနှင့်စာပို့ရန်ခွင့်ပြုထားသော LINE တွင်စာတိုပေးပို့နေစဉ်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်မူရင်းစတစ်ကာများနှင့်မျက်နှာအသွင်အပြင်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ပါရှိသည်။ ...
Yahoo! မေးလ်သည် Windows 10 ကွန်ပျူတာနှင့်တက်ဘလက်သုံးစွဲသူများအတွက် Yahoo ၏အီးမေးလ် application ဖြစ်သည်။ Windows 10 ၏လူကြိုက်များသောအင်္ဂါရပ်များကိုပေါင်းစပ်ထားသောမေးလ်အက်ပလီကေးရှင်းသည် interface နှင့်အသုံးပြုမှုနှစ်ခုလုံးတွင် web application မှထင်ရှားသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ Windows 10...
Facebook Messenger ပရိုဂရမ်ဖြစ်သော Facebook Messenger အတွက် Windows Messenger ကိုသုံးစွဲသူများအားကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဤ application ၏ interface သည် Facebook စာမျက်နှာသို့မသွားဘဲသူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောနိုင်စေရန်ပြုလုပ်ထားသောသင်အသုံးပြုသော chat အစီအစဉ်များနှင့်ဆင်တူသည်။ ပရိုဂရမ်နှင့်အတူသင် Facebook...
Trillian သည်instantရိယာတစ်ခုတည်းမှလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လူမှုကွန်ယက်ပရိုဖိုင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အပြည့်စုံဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုး၊ မက်၊ ဝဘ်၊ ယခင်ဗားရှင်းများတွင်ငါတို့ Trillian Astra ဟုသိခဲ့သောအစီအစဉ်သည် Trillian အမည်ကိုဗားရှင်းအသစ်ဖြင့်စတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီးလူမှုကွန်ယက်ကို ဦး တည်ခဲ့သည်။...
Yahoo Messenger သည်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပို့နိုင်သည်။ သင်၏ Yahoo အကောင့်၊ အီးမေးလ်စသည်တို့ဖြင့်သင်အသုံးပြုသောဤပရိုဂရမ်သည် အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကိုလည်းသင့်အားအသိပေးသည်။ firewall အထောက်အပံ့၊ စကားပြောဆိုမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်း၊...
Hangouts Chat သည်အဖွဲ့များအတွက် Google ၏ messaging platform ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Facebook Workplace၊ Microsoft Teams နှင့် Slack တို့၏ဆင်တူမှုများကိုအာရုံစိုက်စေသည့် application သည်စီးပွားရေးအသုံးပြုသူများအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာရင်းဇယားများ၊ ဆလိုက်များ၊...
ChatON သည် Samsung မှ ထုတ်လုပ်သော အမေရိကနှင့် ပြင်သစ်တွင် အသုံးများသော မိုဘိုင်းလ်စာတိုပေးပို့ခြင်း အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူ သန်း 70 ရှိသော လူကြိုက်များသော chat application သည် နိုင်ငံပေါင်း 237 တွင် ဘာသာစကား 63 မျိုးဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သင့်စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နှင့် ဒက်စတော့ကွန်ပြူတာတွင် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် ChatON သည် အခမဲ့...
SplitCam virtual video capture driver သည် သင့်အား ဗီဒီယိုရင်းမြစ်တစ်ခုတည်းမှ ပုံများကို အပလီကေးရှင်းများစွာထံ တစ်ပြိုင်နက် တင်ပို့နိုင်စေပါသည်။ E.g; သင့်ကွန်ပြူတာသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော ဝဘ်ကင်မရာတစ်ခုရှိပြီး ၎င်းကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အပလီကေးရှင်းတစ်ခုထက်ပို၍ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ဤမျှဝေမှုသည် Windows ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ သင်သည် ယခု...
ယနေ့တွင်၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သော အခြားရွေးချယ်စရာပရိုဂရမ်များစွာရှိပါသည်။ Zello သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် စကားပြောနိုင်သော အပလီကေးရှင်းများကြားတွင် အောင်မြင်သော ဒက်စ်တော့နှင့် မိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာများပေါ်တွင် ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုသည့် သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ပင် စကားပြောဆိုရန် ခွင့်ပြုသည့်...
Ventrilo သည် အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသူများ အချင်းချင်းစုပေါင်းစကားပြောသည့် နာမည်ကြီးပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပရိုဂရမ်သည် ကစားသမားများအား ဂိမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပိုမိုပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမည့် chat room တွင် သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် အလွယ်တကူ ချတ်လုပ်နိုင်ပြီး သင်အလိုရှိပါက သင်သတ်မှတ်ထားသော chat room သို့...
Voxox ပရိုဂရမ်သည် Windows နှင့် အခြားသော မိုဘိုင်းလ်နှင့် PC ပလပ်ဖောင်းများတွင် ရရှိနိုင်သော အခမဲ့ ချက်တင်ပရိုဂရမ်များထဲမှဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများအားလုံး ၎င်းတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့် အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာ ဆက်သွယ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ရိုးရှင်းပြီး ရိုးရှင်းသော အင်တာဖေ့စ်နှင့် အဆင့်မြင့် အင်္ဂါရပ်များစွာကြောင့် ပရိုဂရမ်ကို...
AOL Instant Messenger ကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိ AOL Instant Messenger ကို အသုံးပြု၍ သင့်သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်များနှင့် စကားပြောရန် ကောင်းမွန်သော မျက်နှာပြင်ကို အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု၊ AIM အဆက်အသွယ်များနှင့် သုံးစွဲသူဖိုင်တွဲ၊ သတင်းမီနူး၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော အင်္ဂါရပ်များ။ ၎င်းသည် အမျိုးအစားတူရှိ...
KakaoTalk သည် အသုံးပြုသူ သန်း 100 ကျော်ရှိသော အခမဲ့ အသံချတ်နှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်း အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Windows၊ iOS၊ Android၊ Blackberry နှင့် Windows Phone ပလပ်ဖောင်းများအတွက် အပလီကေးရှင်းများဖြင့် Skype နှင့် အလွန်ဆင်တူပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် HD အသံအင်္ဂါရပ်သည် သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် တစ်ဦးမှတစ်ဦး သို့မဟုတ်...
Slack သည် တစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့များ အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်ဆောင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်း၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို တိုးမြင့်စေသည့် အသုံးဝင်ပြီး အခမဲ့ အောင်မြင်သော ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Android နှင့် iOS မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများ အစောပိုင်းက ထွက်ရှိခဲ့သော အပလီကေးရှင်း၏ Windows ဗားရှင်း၏...
TicToc သည် အပလီကေးရှင်း၏ Windows desktop ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပြီး သင့်အား Android နှင့် iOS ပလပ်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးတွင် သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် အသိအကျွမ်းများနှင့် အခမဲ့ စာတိုပေးပို့ခြင်း၊ အသံခေါ်ဆိုမှုများနှင့် ဖိုင်မျှဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ခွင့်ပြုသည်။ TicToc ဖြင့်၊ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့် တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့များထံ စာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်...
အကယ်၍ သင်သည် ကွန်ပျူတာတွင် သူငယ်ချင်းအသစ်များ ဖွဲ့ရန် အချိန်ရှာသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုများနှင့် စကားစမြည်ပြောရန်၊ ဗီဒီယို၊ အသံနှင့် စာတိုချတ်ပရိုဂရမ်များမှ ခုန်ထွက်ရခြင်းကို ငြီးငွေ့နေပါက Camfrog သည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ Camforg Video Chat ဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိကမ္ဘာကြီးတွင် သင်အလိုရှိသောဘာသာစကားဖြင့်...
Outlook သည် Microsoft Office လက်အောက်ရှိ အောင်မြင်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး Microsoft ၏ လူကြိုက်များသော ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် ရုံးဆော့ဖ်ဝဲအစုံဖြစ်သည်။ Outlook ၏အကူအညီဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်အကောင့်များ၊ သင်၏အဆက်အသွယ်စာရင်းများ၊ အလုပ်များနှင့်ချိန်းဆိုမှုများကို တစ်နေရာတည်းမှ အလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သည်။...
Ripcord သည် Slack နှင့် Discord ကဲ့သို့သော လူကြိုက်များသော ပရိုဂရမ်များအတွက် အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် desktop chat client တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးအဆင့်တွင် ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုသည့် အပလီကေးရှင်းနှင့် သင့်စကားသံနှင့် စာတိုချတ်များ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါရှိသော အက်ပလီကေးရှင်းသည် ထိုကဲ့သို့သော...
ooVoo သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ဗီဒီယိုချတ်လုပ်ရန် အခမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းအပြင်၊ ၎င်း၏တူရကီဘာသာစကားကြောင့် လူကြိုက်များလာနေသည့် ပရိုဂရမ်သည် ၎င်း၏စတိုင်ကျသော အင်တာဖေ့စ်နှင့် ကွဲပြားစေသည်။ သင်ဖန်တီးမည့် ooVoo အကောင့်နှင့် ရုပ်ပုံ၊ စာဖြင့်နှင့်...
Mumble ပရိုဂရမ်သည် အထူးသဖြင့် အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသည့်အသင်းများအတွက် အသံခေါ်ဆိုမှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အွန်လိုင်းဂိမ်းများတွင် အသင်းသည် ကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်ရေးရှိရမည် ဖြစ်ပြီး ပရိုဂရမ်များစွာ နှောင့်နှေးနေသည့် အသံမက်ဆေ့ချ်များ ပေးပို့ခြင်းသည် ပြဿနာကြီးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤပြဿနာကို ကျော်လွှားရန် ပြင်ဆင်ထားပြီး၊ Mumble...